သူနဲ့တွေ့တဲ့ညနေ » Random of Nang Nyi
သော်က အံ့သြစွာ အလောတကြီးပြောနေပေမယ့် သူက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ပြုံးလို့သာနေသည်.. သော်အားမလို အားမရဖြစ်သွားလျက် သူ့လက်များကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါသည်.. လက်များ အေးစက်နေ၏.. ဆောင်းရာသီ၏ ညဦးပိုင်းမို့ ညသည် အတော်အတန်အေးလျက်ရှိပြီ.. သူ ဘယ်အချိန်ထဲက ဒီနေရာမှာ သော့်ကို စောင့်နေလဲမှ မသိတာ.. “လင်း ဘယ်ချိန်ကတည်းက ဒီမှာစောင့်နေတာလဲ.. သော့်အိမ် ဘယ်လိုသိလဲ.. သော် အလုပ်ဆင်းရင် ဒီကပြန်တတ်မှန်းရော သေချာသိလို့လား”
သော်က ထပ်၍ ဂျီကျတော့ သူက မေးဆတ်လျက် သွားလေဟု ပြောသည်.. လမ်းထိပ်နဲ့ အိမ်က မဝေးလှပါ.. သော်တို့လမ်းက လူလည်း မရှုပ်လှဘဲ လမ်းမီးများတော့ ထိန်လင်းလျက်ရှိနေသည်.. သော် သူ့လက်မောင်းကို တွဲခိုလျက် လျှောက်လာခဲ့သည်.. ဘာကြောင့်ရယ်မသိ.. ထိုအပြုအမူကို သူ လက်မခံဘဲရှိမည်ဟု ထင်နေသော်လည်း သူက အသာတကြည်ပင် သော့်လက်ကိုတောင် ပြန်၍ အုပ်ကိုင်ထားသေးသည်… အနားကို သိပ်နီးကပ်နေမိပြန်တော့ သူ့ဆီမှ သင်းသင်းပျံ့ပျံ့ မွှေးရနံ့တစ်ခုကို ရနေ၏.. ဆပ်ပြာနံ့လား ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့လား ဘော်ဒီိလိုးရှင်းလား ရေမွှေးနံ့ဆိုရင်လည်း အတော်ကောင်းတဲ့ရေမွှေးဖြစ်ရမည်.. ခြံဝရောက်တော့ သော် စိတ်မလျှော့ချင်သေးသလို “တကယ် ပြန်တော့မှာလား” ဟု မေးတော့.. သူက ခေါင်းညိတ်၍သာ ဖြေပါသည်.. ပြီးတော့.. ရှေ့ကိုတလှမ်းတိုးလျက် သော့် နဖူးကို သူ မွှေးနမ်းသွား၏.. အချိန်ကြာမြင့်စွာ.. ပြီးတော့ တရှိုက်မက်မက်.. စက္ကန့်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်လဲ.. မိနစ်ပေါင်းများစွာလား.. သော့်စိတ်ထဲမှာတော့ နာရီပေါင်းများစွာကြာမြင့်သည် ထင်မိ၏.. ဒူးများညွတ်ကျလုမတတ်..
“ကိုဆွေလင်း သူငယ်ချင်းလို့ပြောတယ်.. ကိုဆွေလင်း နေမကောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကြာပြီ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်ကတည်းက အရမ်းဆိုးလာလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီး.. မနေ့က နေ့လည်ကပဲ.. သေ.. အဲ… ဆုံး သွားတယ်တဲ့.. အဲ့ဒါ သူ့ Phone Contact တွေထဲကနေ သူ့အိမ်ဖုန်းနဲ့ နင့်ဖုန်းကို ရှာပြီးအကြောင်းကြားပေးတာပြောတယ်… ”
မနေ့က နေ့လည်ကပဲ.. .. ဆုံးသွားတယ်… …
ဟင့်အင်း.. မဖြစ်နိုင်တာ.. မဟုတ်တာ.. လင်းက ဒီကိုပြန်ရောက်နေတာပါ… နေမကောင်းတဲ့ပုံလည်း မဟုတ်ပါဘူး.. လင်းကို သော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာ.. လင်းရဲ့ ကိုယ်နံ့ကိုတောင် အခုထိ ရနေတုန်းလိုပဲ.. ပြီးတော့ သော်နဲ့တောင် စကားတွေ ပြောနေသေးတာ မဟုတ်လား.. အေးစက်စက်လက်ကလေးများဖြင့် သော့်လက်ကိုတောင် ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သေးတာမဟုတ်လား.. သော့်ကိုတောင် ဒီအိမ်ရှေ့ထိပြန်ပို့ပေးခဲ့သေးတာ မဟုတ်လား.. သော့် နဖူးကိုတောင်…. .. ဟင့်အင်း.. မဖြစ်နိုင်လိုက်တာ..
“အေး.. သော်.. ခဏလေးကိုင်ထားနော် သမီး” ဆိုပြီး.. “သားကြီးရေ.. သော့် ဆီကဖုန်း… ”လို့များ ခေါ်ပေးမှာလား.. ခေါ်ပေးပါနော် ကြီးမေ.. လင်းနဲ့ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် စကားပြောပါရစေ.. သူငယ်ချင်းတွေက အဲလိုပဲ သိပ်နောက်တတ်တာလို့ သော့်ကို ပြန်ဖြေတာကို ကြားပါရစေ.. “ခင်ဗျားကလည်းလေ..”လို့ အရင်လို ညဉ်းတွားပြောဆိုသံကို ကြားပါရစေ… ကပျက်ကချော်နဲ့ရယ်တတ်တဲ့ အသံချိုချိုလေးကို ကြားပါရစေ….
ဖုန်းက မြည်နေဆဲ.. လာကိုင်မည့်သူ မရှိသေး.. ကြီးမေ ဖုန်းကိုင်ပါတော့.. ဒါမှမဟုတ် လင်းကိုယ်တိုင် ကိုင်လိုက်ပါတော့.. ဒါမှ မဟုတ်လည်း တစ်ယောက်ယောက်.. ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်…. ..
သော့် လက်ဖျားများ အေးစက်လာပါသည်.. … .